अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले सात वटा वडाका भित्री सडकमा चारपांग्रे चलाउन लगायो रोक ! कुन कुन ठाउँमा चलाउँन पाइदैन ? « Light Nepal
अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले सात वटा वडाका भित्री सडकमा चारपांग्रे चलाउन लगायो रोक ! कुन कुन ठाउँमा चलाउँन पाइदैन ?
Published On : 10 January, 2018 7:31 pm
काठमाडौँ, २६ पुस – काठमाडौँ महानगरपालिकाले सात वटा वडाका भित्री सडकमा माघ २ गतेदेखि चारपांग्रे सवारी साधन प्रवेश गर्न निषेध गर्ने भएको छ ।
भोटाहिटीबाट असन चोकसम्म चारपांग्रे सवारी साधनलाई एकतर्फी निषेधित क्षेत्र बनाइएको छ ।